Mogadishu Journal » Warar sheegaya in ay is casishay guddoomiyihii bankiga dhexe ee Soomaaliya
Mjournal :–War ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in guddoomiyihii bankiga dhexe Soomaaliya Yusuf Abrar iska casishay xilkaas, oo uu dhawaan u magacaabay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud.
Masuul ka tirsan dowladda faderaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in war qoraalka ah oo ay soo dirtay Yussur Abraar guddoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya ay ku sheegtay inay iska casishay xilka ay heysey.
Wararku waxaa ay sheegayaan ay soo ifbaxeen warar sheegaya in guddoomiyaha bankiga dhexe Yusur Abraar tahay qof ku caan-baxay musuq-maasuq iyo wax is daba-marin, kadib markii sida la sheegay ay qoraale u soo gudbiyeen dowladda hay’addo caalami ah oo ay horay ula soo shaqeysay.
Laakiin ilaa iyo hadda ma jir war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda oo saxaafadda lagu ogeysiinayo in ay is casishay guddoomiyihiin bankigad dhexe Soomaaliya Yusur Abraar oo tan iyo markii xilkaa loo magacaabay todobaad hore uun Muqdisho dib ugu laabtay.
Mar la wareystay kadib markii xilkaas loo magacaabay waxaa ay sheegtay in ay ka shaaqeyn doonto sidii dib-u-habeyn loogu sameyn lahaa howlaha bankiga dhexe ee Soomaaliya, islamarkaana looga hortagi lahaa musuq-maasuqa.
Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh ayaa markii ugu horeysey waxaa ay isku arken Yussur Abraar guddoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya shirkii “Hiigsiga Cusub” ee lagu qabtay Brussels.
C/xakiin Xaaji Fiqi’’ sadaxda sano ee soo socta waxaan dhisi doonaan ciidamo tayo leh oo leysku haleyn karo